Mmiri ozuzo na June-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Mmiri ozuzo na June
Ihu igwe na June, na-enwu gbaa ma doo anya, mgbe ụfọdụ, na-efegharị site na nnukwu ígwé ojii, wepụ mkpọtụ nke obi, ikuku jupụtara na isi ísì ụtọ nke okooko osisi, na-ele anya n’ebe dị anya, ugwu na-acha akwụkwọ ndụ, okooko ndị dị nso ndị mara mma, kanye ihe osise dị iche iche n’anya anyị.
Mmiri ozuzo na June adịghị nro ma mara mma dị ka mmiri ozuzo. Ọ na-emesapụ aka, mgbe ụfọdụ ọ na-agbaba n’ime ehihie, na-ekwu okwu ụbọchị atọ na abalị atọ. Mgbe ụfọdụ, ọ na-apịa onwe ya ihe n’abalị, égbè eluigwe na mmiri ozuzo na-ada n’eluigwe n’abalị.
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị ahụ buru nnọọ ibu, mmiri ozuzo na-agbada ya. Ọ na-ada ma na-eteghari ọzọ, ọ na-alakwa ọzọ. Mpempe akwụkwọ ndị dị otú ahụ nke mpempe akwụkwọ ahụ nwere ike siri ike na nke na-adịghị agbanwe agbanwe, nke a ga-eme ndị mmadụ ihere maka ndị na-alaghachi azụ mgbe ha nọ na nsogbu.
Mgbe mmiri ozuzo gasịrị, ọdọ mmiri ahụ na-eji ebili mmiri dị nrugharị efe. Ìhè nke ọdọ mmiri ndị ahụ na-enwu na willow, dị ka ịjụ onye wicker: "Gịnị kpatara enyo ahụ ji nọrọ jụụ n'ihu mmadụ niile, mana akwụkwọ, ọka ájá, na obere ifufe ga-efegharị onwe ya." Wicker na-eme ka ahụ mara mma maa jijiji, dị ka a ga - asị na ọ ga - aza: “Enyo ahụ na - ajụ oyi ma na - akpụ akpụ, ọ nwere ike ịpị ya aka, ọ gaghị enwe ike ịnagide ihe a na - eti ya. Mana uche gị siri ike, ị ga-ahụ mma na adịghị mma; obi gị sara mbara, jiri nwayọ sachapụ unyi ahụ gị; ị na-emeghe ihe, obi ga-adịkwa gị ngwa ngwa mgbe nnukwu ebili mmiri gachara. ” Osisi ọdọ mmiri na-ama jijiji ma na-amụmụ ọnụ ọchị. Obere azụ ole na ole wụliri ọ jụ, ọdọ mmiri ahụ na-efegharị mgbe ọ na-efegharị.
N’ọnwa June, na-egosi agba dị iche iche, na-awụda akwụkwọ na-ekpo ọkụ ma mara mma, juputara na ntorobịa ntorobịa, na-ebu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke June, ka anyị banye na ebili mmiri nke oge, n’echiche nrọ. Na njem nke ndụ, bulie njem.
Ọzọ: Oge Arbutus